Ny kinova vaovao an'ny Deepin 15.10 dia tonga miaraka amin'i KWin ary maro hafa | Avy amin'ny Linux
Ny kinova vaovao an'ny Deepin 15.10 dia tonga miaraka amin'i KWin sy maro hafa
vao haingana Navoaka ny kinova vaovao an'ny Deepin 15.10, izay dia fizarana miorina amin'ny Debian, saingy mamolavola tontolo iainana Deepin Desktop misy azy ary manodidina ny 30 ny rindranasan'ny mpampiasa, ao anatin'izany ny mpilalao mozika DMusic, ny mpilalao horonan-tsary DMovie, ny rafitra fandefasan-kafatra DTalk, ny installer ary ny foibe fametrahana Deepin Software Center.
Ny tetikasa dia natsangan'ny vondrona mpamorona iray avy any Shina, saingy nanjary tetikasa iraisam-pirenena izy io satria nanohana fiteny maro izy ary ny fivoarana rehetra dia zaraina araka ny fahazoan-dàlana GPLv3.
Ny singa Desktop sy ny rindranasa dia novolavolaina tamin'ny alàlan'ny C / C ++ sy Go, fa ny interface dia voalamina amin'ny alàlan'ny teknolojia HTML5 amin'ny fampiasana ny motera web Chromium.
1 Inona no vaovao ao amin'ny Deepin 15.10?
1.1 Ahoana ny fanavaozana ny Deepin 15.10?
1.2 Ahoana ny fomba hahazoana Deepin 15.10?
Inona no vaovao ao amin'ny Deepin 15.10?
En ity kinova vaovao an'ny Deepin 15.10 toy ny mpitantana varavarankely default fa tsy deepin-wm, dde-kwin dia afaka (natao ho an'ny kininina kwin Deepin) izay mampihena ny fihinanana fahatsiarovana ary mampitombo ny fahombiazan'ny fandikana.
Deepin 15.10 miaraka amin'ny «Fampiarahana mandeha ho azy» asa hizara ho azy ireo karazana rakitra mitovy amin'ny lahatahiry eo amin'ny birao (ny horonan-tsary, ny antontan-taratasy, ny mozika, ny rindranasa sy ny sary dia voakambana ao anaty lahatahiry samihafa).
ihany koa nanampy fanohanana ny fifanakalozana rindrambaiko desktop cyclical voafantina amin'ny endrika fampisehoana slide miaraka amin'ny fahaizana mametraka ny elanelana misy eo amin'ny fanoloana sary.
Misy fizarana misaraka nampiana hikirakira ny vokam-peo, izay ahafahanao manafoana mifantina na mamela ny voka-dratsy ho an'ny fandidiana isan-karazany (ohatra, rehefa misy fampandrenesana aseho na novonoina).
Etsy ankilany, nanampy ny fanokafana ny efijery ny mpitantana ny fivoriana raha miditra amin'ny teny miafina ary manamarina amin'ny alàlan'ny rantsan-tànana.
Nanampy safidy iray ho an'ny tontonana mba handeha amin'ny fomba torimaso rehefa fipihana tsara ny kisary fanidiana, ampiharina ny fahafaha manafoana ny plugin miaraka amin'ny fampiharana ny "harona", ampiana ny sainam-pirenena hametrahana fifandraisana amin'ny tamba-jotra.
Ny interface search efa nandroso dia nampiana ho mpitantana rakitra, ny bara adiresy dia nohavaozina, nampiana safidy mba handika ny lalana mankany amin'ny solaitrabe ary hanitsy ny làlana ao amin'ny bara adiresy.
Ary farany, ny tonian-dahatsoratr'i Deepin Editor ao amin'ny tsipika fitadiavana dia manome fampisehoana ny isan'ny tarehin-tsoratra ankehitriny ary manampy fanohanana ny fomba fanovana antontan-taratasy roa miaraka amin'ny fizarana ny efijery ho faritra roa.
De ireo fanovana hafa miavaka ato amin'ity kinova vaovao hitantsika ity:
Miorina amin'ny Debian Stable: hahafahan'ny mpampiasa manana fanavaozana ara-potoana sy fitoniana rafitra tsara kokoa.
Fampiharana nohavaozina ao anatin'izany ny WPS Office 2019
Ny feon'ny rafitra (famafana ny salanisa, ny fako ho haidina, ny fisondrotana / ny fihenan'ny boky, sns.) Dia azo alefa sy hofoanana amin'ny tsirairay na manerantany amin'ny alàlan'ny bokotra tokana.
Bara adiresy vaovao ao amin'ny manager file miaraka amina autocomplete, path path ary fampiasa switch.
Ahoana ny fanavaozana ny Deepin 15.10?
Ho an'ireo rehetra mpampiasa ny kinova Deepin OS izay ao anatin'ny sampana "15.x". Ho afaka hahazo an'ity fanavaozana vaovao ity izy ireo raha tsy mila mametraka indray ilay rafitra.
ihany tsy maintsy manokatra terminal izy ireo ary mihazakazaka:
Amin'ny faran'ny fametrahana ny fanavaozana ny rafitra, asaina mamerina ny solo-sainanao.
Ahoana ny fomba hahazoana Deepin 15.10?
Raha tsy mpampiasa ny fizarana ianao ary te hampiasa azy amin'ny solosainao na hizaha azy amin'ny milina virtoaly.
Azonao atao ny mahazo ny sarin'ny rafitra, Mila mankany amin'ny tranonkala ofisialin'ny tetikasa ianao amin'izay ahafahanao misintona ny sary ao amin'ny fizarana fampidinana azy. Ny haben'ny sary iso dia 2.3 GB.
Amin'ny faran'ny fampidinana anao dia azonao atao ny mampiasa Etcher hamonjy ilay sary amin'ny pendrive ary manombatoa ny rafitrao amin'ny USB.
Ny rohy dia toy izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Ny kinova vaovao an'ny Deepin 15.10 dia tonga miaraka amin'i KWin sy maro hafa
Armando Mendoza sary placeholder dia hoy izy:
Nanome ahy lesoka maro izany ... Nifindra tany Debian aho ary voavaha ny zava-drehetra .... tokony hanao ny tsara indrindra izy ireo
Valiny ho an'i Armando Mendoza